नेपाली चलचित्रलाई विश्व बजारमा चिनाउने लक्ष्य बोकेका निर्देशक आचार्य
काठमाडौं : नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पढेलेखेका निर्देशकमध्येका एक ऋषिराज आचार्य पर्छन् । उनी मिहेनती तथा इमान्दार छवि बनाएका निर्देशक मानिन्छन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका निर्देशक आचार्यले बि.सं. २०६३ देखि ५ वर्षसम्म बरिष्ठ निर्देशक शम्भु प्रधानको सहायक भएर धेरै टेलिसिरियल तथा चलचित्रमा सहायक निर्देशकको काम गरे ।
त्यसपछि "आफन्त" , "यात्रा जिन्दगीको" लगायतका दर्जनौं सुपर हिट टेलिसिरियलहरु निर्देशन गरे, जुन नेपाल टेलीभिजनबाट प्रशारण भएका थिए । करिब ५ वर्ष टेलिसिरियलहरु निर्देशन गरिसकेपछि ठुलो पर्दाको चलचित्र निर्देशन गर्न शुरु गरेका आचार्यले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र "मिस्टेक" हो ।
चलचित्र मिस्टेकबाट बि.सं. २०७२ मा ब्लक बष्टर नेपाली चलचित्र अवार्ड (२०७१) बाट नव निर्देशक अवार्ड पाएका उनले बि.सं. २०७४ मा चलचित्र "सपना तिम्रो मेरो" निर्देशन गरे, जुन अत्यन्तै मन पराइयो । त्यसपछि चलचित्र "सुन्तलीलाई भगाई लग्यो झिल्केले" चलचित्रबाट निर्देशक आचार्यले डि सिने अवार्ड (२०७४) बाट उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जिते । २०७५ मा चलचित्र "ड्रीम गर्ल" का लागि निर्देशक आचार्यले ग्लोबल मोसन पिक्चर अवार्ड नेपालबाट उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड पाए ।
निर्देशक आचार्य समाजसेवामा पनि उत्तिकै रुची राख्छन् । चलचित्र "ड्रीम गर्ल" बाट उठेको रकम उनले कैदी बन्दीलाई कपडाहरु बाँढे । विभिन्न अनाथ आश्रममा सहयोग गरेका आचार्यले आफ्नो कतिपय जन्मदिन अनाथ आश्रममा अनाथहरुलाई खाना खुवाउने तथा अन्य आर्थिक सहयोग गरेर मनाउँदै आएका छन् ।
निर्देशक आचार्य विभिन्न संघ सस्थाबाट सम्मानित पनि भएका छन् । उनलाई लोकतान्त्रिक खेलकुद परिषद् तथा चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल (दाङ)ले वर्षौसम्म उत्कृष्ट चलचित्र निर्देशन गरेर चलचित्र क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरे बापत सम्मान गरेको छ । साथै निर्देशक आचार्य विभिन्न अवार्ड कार्यक्रमहरुमा निर्णायकको भुमिका निभाएका छन् ।
चलचित्र लेखन तथा निर्देशन बाहेक आचार्यले विगत १२ वर्षदेखि आर. बि. मुभिजमा अभिनय सिकाउँदै आएका छन् । उनले अभिनय सिकाएका धेरै बिद्याथिहरु अहिले विभिन्न चलचित्र तथा टेलीचलचित्रमा अभिनय गरिरहेका छन् ।
हाल उनले लोकप्रिय हास्य कलाकारहरुलाई लिएर हास्य चलचित्र "चुरिफुरी " निर्माण गरिरहेका छन् । हास्य चलचित्र “चुरिफुरी “ले दर्शकहरुलाई भरपूर मनोरञ्जन दिनेमा विश्वस्त छन् निर्देशक आचार्य । कुनै पनि विषयवस्तुलाई गहन तरिकाले प्रस्तुत गर्न चाहने आचार्यले प्रेम कथा, हास्य प्रधान तथा समाजमा रहेका रीति तथा कुरीति र त्यसको समधान गर्ने बारेमा चलचित्र बनाउने गर्छन् ।
थाइल्यान्ड, दुबई, कतार जस्ता देशमा गै चलचित्र छायांकनको काम गरेका निर्देशक आचार्यले भविष्यमा विश्व बजारमा समेत नेपाली चलचित्रलाई चिनाउने लक्ष्य राखेको बताए ।